Darbiga weyn ee cagaaran ee Saxaraha ka dhanka ah xaalufka | Saadaasha Shabakadda
Darbiga weyn ee cagaaran ee Saxaraha ka dhanka ah xaalufka
Casudi casals | | Isbedelka Cimilada, Saadaasha hawada
Socdaalka derbiga cagaaran
Weli socda, oo horumarintiisu bilaabantay toban sano ka hor, mashruucan ayaa ah wuxuu ka gudbaa 11 dal Waxay ku dhalatay ujeedo ah inay joojiso horomarinta xaalufka ee dhulkan weyn ee Afrika. Waxaa loo yaqaan 'The Great Green Wall of Africa', ama Hindisaha Darbiga Weyn ee Weyn ee Saxaraha iyo Sahel. Hadafkaagu waa mid aad u fudud, laakiin waa weyn. Waxaa lagu maalgeliyey 7.000 milyan qiyaastii euro, darbigan ayaa ujeedkiisu yahay inuu daboolo 8.000 oo kiilomitir oo dherer ah iyo 15 ballac ah. Si loo helo fikrad, wadar ahaan 120.000 oo kiiloomitir oo laba jibbaaran. U dhigma ku dhowaad rubuc cabbirka Isbaanishka!
Waxay kaloo leedahay laba ujeeddo. Dhinaca mid ka mid ah ka ilaali in lamadegaanku hore u socdo, iyo dhinaca kale yareynta saameynta isbedelka cimilada. Abuuritaanka malaayiin geed waxay leedahay faa iidooyin badan, acacasna waxaa loo xushay geed ahaan shil ma ahan. Waxay si adag u diidaan abaarta sidoo kale hooskooda ayaa ka caawiya sidii loo badbaadin lahaa biyaha meelaha koraya. Faa'iidooyinkeeda waxaa kaloo ka mid ah in dad badani ay uga baxaan meelahaas cunto la'aan.
1 Waddada cagaaran, waa fikrad qarnigii hore jirtay
2 Ma saxbaa in wax laga beddelo nidaamka deegaanka markii la doono?
3 Fursadaha kale ma la tixgelin karaa?
Waddada cagaaran, waa fikrad qarnigii hore jirtay
In kasta oo uu cusub yahay, Fikradani waxay soo bilaabatay 1927. Injineerka Kaymaha Faransiiska Louis Lavauden wuxuu abuuray ereyga "xaaluf" si loo sharaxo in lamadegaanku u horumaro ka faa'iideysiga beeraha iyo xaalufinta dhulalka oomanaha ah. 25 sano kadib, 1952, fikirka ah hagaajinta xaaladaha nololeed ee Saxaraha ma uusan baabi'in. Injineer kale oo kaymaha, Ingiriisiga Richard St. Baber Baker wuxuu soo jeediyay fikradda ah in la dhiso derbi weyn oo ah 50km oo abuuro "gidaar cagaaran" oo geedo ah si loo xakameeyo faafitaanka lamadegaanka.
Abaarihii ka dhacay Geeska Afrika iyo Saaxil 70-meeyadii, waxay bilaabeen bilow fikrado si loo yareeyo xaaladdan oo dhan. Ma ahayn ilaa 2007, halkaasoo Midowga Afrika uu ku ansixiyay mashruucan taasi oo ka gudbi doonta qaaradda oo dhan, laga soo bilaabo Senegal ilaa Jabuuti. Mashruuc hami leh oo, weli hammi leh oo socda, waxaa jira kuwa dhahayo xoogaa dadaal dheeri ah waan sameyn karnaa.
Ma saxbaa in wax laga beddelo nidaamka deegaanka markii la doono?
Waxaa laga yaabaa inay tahay qaybta meesha, sida marar badan oo kale, loo arkay taas ficilkeenu wuxuu si xoogan saameyn ugu yeelan karaa wax si dabiici ah loo abuuray. Louis Lavauden waxaa laga yaabaa inuu ku saxnaa inuu ugu yeero "lamadegaan", laakiin waxaan sidoo kale hada ognahay inay cimilada isbadali karto. Dhaleeceynta ayaa mar kale la gaarsiiyey. "Qasdiyayaashu" waxay ku doodayaan, bey'ad caafimaad oo dabiici ah oo saameyn ku leh cimilada, looma tixgelin karo inay tahay nooc cudur dabiici ah.
Muranka kale ee soo ifbaxaya ayaa ah in haddii ay taasi runti macnaheedu tahay horumarin lagu sameeyo xaaladaha nololeed ee dadka halkaas ku nool, ma aha wax "caadi ah". Taasi waa, halkii laga qaban lahaa dhibaatada, diiradda, waxa la qabtay ayaa ah in la sawiro wareegga. Dhinaca kale sidoo kale waxay ku habboonaan lahayd in la qabsado aagag ballaaran, oo aan layn sidan u eg oo cidhiidhi ah lahayn. Fikradda ugu dambeysa waa in lagu daraa in ay ahayd in la hareereeyo Saxaraha oo dhan, taas oo ay weheliso aagagga cagaaran ee hadda jira ka dhigaya "derbiga" cagaaran xoogaa aan la arki karin.
Fursadaha kale ma la tixgelin karaa?
Miiska waxaa had iyo jeer ka jiray habab kala duwan oo isla dhibaatada loo wajaho. Mid ka mid ah xulashooyinkaas waa farsamo ku saleysan awoodda dhulka uu dib ugu soo noolayn karo dhirta keligeed. Loo yaqaan sida xusuusta deegaanka ama dib u soo nooleynta dabiiciga ee ay maamulaan beeraleyda. Daadka iyo xayawaanku waxay u qaadi karaan abuurka meelaha ay ka soo bixi karaan. Nidaamyada xididka geedaha duugga ah ayaa sidoo kale soo saari kara laamo cusub. Tani waxay noqon lahayd hab ka mid ah dib ugu soo celiyo muuqaalka qaab dabiici ah oo aan loo baahnayn in la beero geedaha si toos ah.
Afrika waxay leedahay xulashooyin, suurtagal, laakiin si xoogan loogu calaamadeeyay dhiig-miirashada iyo isbedelka cimilada. Darbiga cagaaran waa caqabad, biriig ah oo aadan dib dambe uga noqon karin. Si kastaba ha noqotee waa lagu guuleystay, waxaan rajeyneynaa dhamaadka, waxay u adeegi doontaa sidii joogsi buuxda. Halkee lagu qoraa sheeko cusub, oo nolosha ka buuxda iyo dhul aan oomane lahayn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Darbiga weyn ee cagaaran ee Saxaraha ka dhanka ah xaalufka
Shirka Cimilada cusub ayaa lagu qaban doonaa Bonn
Tallaabooyinka u nuglaanta Spain ee isbeddelka cimilada